Wararkii ugu Danbeeyey Shirkii Rooble iyo Farmaajo. – STAR FM SOMALIA
Kulan saacado badan qaatay ayaa ka qabsaamay Xarunta Madaxtooyada Soomaaliya kaas oo lagu dhexdhexaadinayay Madaxweynaha muddo xileedkiisa uu dhamaaday ee Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaaraha xilgaarsiinta, isaga oo yeeshay dhowr weji shirka.
Shalay Duhuradii ayaa Madaxweynayaasha Galmudug & Koonfur Galbeed waxaa ay isku kreneen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha, iyaga oo si aad ah uga dooday qodobada ay isku hayaan.
Iintaas kadib guddiyo ay labada dhinac iska soo saareen ayaa kulmay, kuwaas oo aan wax tajiijo ah keenin, hayeeshee ay markale isku laabteen Madaxweynaha iyo Ra’iisul Wasaaraha.
Xogaha laga helay kulanka ayaa sheegaya in Madaxweynaha & Ra’iisul Wasaaraha ay mowqifyo adag kala taagan yihiin, waxaana qodobada ay isku mari la’yihiin kamid ah, kiiska Ikraan Tahliil in lagu sameeyo baaritaan madax bannaan oo hey’addaha Cadaaladda u gudubto iyo arrinta Agaasimaha Hay’adda NISA.
Wararka ayaa waxaa ay intaasi ku darayaan in Madaxweyne Farmaajo uu diiday labadaas qodob, kuna adkeystay in gorgortan aan laga geli karin, halka Ra’iisul Wasaaruhu uu mowqifkiisa ku taagan yahay, taas oo keentay in wada-hadallada oo aan wax natiijo ah kasoo bixin in lagu kala tago.
Maanta ayaa wada-hadallada oo ay garwadeen ka yihiin Madaxweynayaasha Galmudug & Koonfur Galbeed la sii amba qaado, si xal looga gaaro khilaafka Madaxweyne Farmaajo iyo Ra’iisul Wasaare Rooble.